Fa maninona no mitondra ny RBM? | Hanan-dranomasina
Ny fitantanana miorina amin'ny hery (RBM) dia miorina amin'ny lesona ianarana avy amin'ny fitantanana ny vatohara am-polony taona maro, indrindra fitantanana ny tontolo iainana (EBM). Ny RBM sy EBM dia samy manasongadina ny fiarovana ny firafitra sy ny fiasa sy ny fiasa ara-tontolo iainana, ary diniho ny fiaretana, fiantraikany mitambatra, ary ny rafitra socio-ekolojia lehibe kokoa. Ny fahasamihafana lehibe amin'ny RBM dia ny manaiky fa ny olombelona dia mahavita mitondra fiovana, fampifanarahana ary fanovana, ary noho izany dia mikendry ny hamahana ny fitondran'olombelona. Ny fiomanana amin'ny fanovana dia toa lasa toe-javatra mitongilana lehibe amin'ny fitantanana ny fahamendrehana.ref kitiho eto ho fanoritsoritana ny fomba fitantanana mitambatra hafa.
Evolisiona fitantanana ny harena voajanahary. Source: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMcleod et al. 2019manokatra fisie PDF .
Ny fampiharana RBM dia manana tombony lehibe:
Avelao ny mpitantana hanao laharam-pahamehana ny hetsika fitantanana izay mamaha ny fandrahonana ho avy amin'ny rafitra sosiolika ary mandrisika ny fampifanarahana sy fanovana.
Ampahafantarina ny fomba omena ny loharano toy ny famatsiam-bola sy ny fotoana ho an'ny mpiasa amin'ny paikady sy tetikasa isan-karazany mifototra amin'ny fandrahonana voafaritry ny rafitra sosiolojia.
Manome lalana hitantana haran-dranomasina ao ambanin'ny fizotry ny fiovan'ny toetr'andro.
Manome hery ireo mpiasan'ny fikajiana ny asa eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fanomezana fanantenana sy ny fanamafisana ny andraikitra sy ny maha-zava-dehibe ny hetsika fitantanana eo an-toerana ary mampifandray ny mahasoa ny vatohara sy ny fokonolona eo an-toerana akaiky kokoa.
Miasa ho toy ny fiara manatitra ny fanoloran-tena manerantany amin'ny fiovan'ny toetr'andro, toa an'i CBD Aichi misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTarget 10 ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTarget 15, Fifanarahana momba ny toetr'andro any Paris misokatra amin'ny varavarankely vaovaoArticle 7 ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoArticle 8manokatra fisie PDF , Tanjona Fampandrosoana maharitra misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTarget 14.2.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fitarihan'ny fitantanana miorim-paka amin'ny fanaraha-maso ny vatohara: Famerenana ara-teknikamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaraha-maso ireo andian-tsarimihetsika an'habakabaka herbivorous toy ny tondrozotra momba ny faharetan'ny vatohara: torolàlana azo ampiharina amin'ireo mpitantana ny vatohara any amin'ny faritr'i Azia Pasifika.manokatra fisie PDF